အဖြူရောင်အိမ်လေးတစ်လုံး: မီ ရဲ. မောင်
မောင်.ကို စိတ်မဆိုးပါနဲ.လို. အရင်ဆုံး တောင်းပန်ပါရစေ ၊၊ မောင်မှန်ကန် မယ်ထင်လို. ရင်နာနာနဲ. ဒီလမ်းကို ရွေးချယ် လိုက်ရ တာပါ မီ ၊၊ မီ.အပေါ်မှာ ဒီနေ. အထိ မောင် မေတ္တာ မယွင်း သေးပါဘူးမီ၊၊ မီကို မောင်ချစ် နေဆဲပါ ၊၊ စိတ်ကူးမယဉ် တက်တဲ. လက်တွေ.ဆန်တဲ. မောင်.အတွက် မီ နဲ. မောင် တို.ရဲ အချစ်ဇာတ် လမ်းက တခန်းရပ်သင်.တာ ကြာပြီလေ ၊၊ မြန်မာပြည်မှာ မပျော် နိုင်တော.တဲ. မီ အတွက် မောင်.ရဲ. အကြင် နာတွေ က ဘာများ အသုံး ၀င်ပါ မလဲ မီ ၊၊ မောင် က လည်း မြန်မာ ပြည်က မခွာ နိုင်ဘူးမီ ၊၊ မောင်.အလုပ် အကိုင်လည်း အဆင် ပြေနေ သားနဲ. ဘာ အတွက် မောင် ရေခြား မြေခြား သွားပြီး စီပွား ရှာနေ မလဲ ၊၊ ဒါပေ.သည်. မီအတွက် ကျတော.လည်း ဒီ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဆင် မပြေ ပြန်ဆိုတော. လည်း ..................
မီအမြဲပြော နေတဲ. မသန်.ရှင်းတဲ. ငွေတွေ ကို အခုတော. မီလိပ်ပြာ မသန်.မဖြစ် ပါနဲ.တော. ၊၊ မောင်ရှာတဲ. ငွေတွေကို လိပ်ပြာသန်.သန်. နဲ. ထိန်းသိမ်းနိုင် မယ်.သူကို ပဲ မောင် အပ်လိုက်တော.မယ် မီ ၊၊ မီတို.ပြောနေ တဲ. Internet တွေ Email တွေ မောင်မသိပါ ဘူးမီ ၊၊ ဒါပေမယ်. မောင်.အလုပ်ကို မောင် ကောင်းကောင်း သိတယ် ၊၊ မောင်ဟာ မီလေးစားနေတဲ. အသ်ိုင်းအ၀ိုင်း က မဟုတ်ပေ မယ်. မောင်.ပတ်ဝန်း ကျင် မှာ မောင်လည်း မရှိမဖြစ် အသုံးဝင် ပါ တယ် မီ ၊၊
အခုအချိန်မှာ မီဟာ ငွေရှာနိုင် ပြီ ၊ မီပြောသလို သန်.စင်တဲ. ငွေ ကို အများကြီး ရှာနိုင်တဲ . မီကိုလေးစား ပါတယ် ၊၊ မောင် က တော . မလွတ်နိုင် သေးတဲ. သံသရာ ထဲ မှာ မီ ရဲ. မိဘတွေ ၊ မီ ကိုယ်တိုင် အထင်မကြီး မလေးစား တဲ . မသန်.စင် တဲ. ငွေ တွေ ကို ဆက်ရှာ နေရအုံးမယ် မီ ၊၊ လူတိုင်းကတော. သန.်စင်ချင် တာပေါ. လေ၊၊ မီရယ် အားလုံးကိုမေ. ထားပြီး တစ်ခုလောက် စဉ်းစားကြည်.စမ်း ပါ ၊၊ မကောင်းလို. မနေ တော. ဘူး ဆိုပြီး အားလုံးက ကိုယ်လွတ် ရုန်းပြီး ထွက် သွားကြမယ် ဆိုရင် ဘယ်သူတွေက နစ်နာမလဲ ၊၊ မီ နဲ. မောင် နဲ. မှာ ဘယ် သူက ကိုယ်လွတ် ရုန်းပြီး ထွက်ပြေး သူလဲ မီ ၊၊ ဒီဒုက္ခတွေ ကို ကျန်နေတဲ. သူတွေနဲ. အတူမျှဝေ ခံစားဖို. မီစဉ်းစားခဲ.ဘူးပါသလားမီ ၊၊
မီ ရေ ကွာခြား တာ တွေကတော. အများ ကြီးပေါ. ကွာ ၊၊ မီ ရုံးသွား ရင်စီး ရ တဲ. SMRT ဆိုတဲ. Aircon ရထား မရှိဘူး ၊၊ SBS ဆိုတဲ. Aircon Bus တွေမ ရှိဘူး မီ ၊၊ Telephone လိုင်း ကောင်းကောင်း မမိ ဘူး မီ ၊၊ ဒီမှာ Morning Greeting Message ပို.ရင် ညမှ ရောက်ရင် ကံကောင်း မီရေ ၊၊ အဲဒီ တော. မောင်နား လည်ပါတယ် မီ ၊၊ အဓိက ကတော. မီး မ မှန်ဘူး မီ ၊၊ ဒါတွေ ကို မောင် သည်းညည်း ခံနိုင် ပေမယ်. မီ သည်းညည်း မခံ နိုင်တော. ဘူးလေ ၊၊
မီ ခဏလေး ပြန်လာ တာ တောင် ခြင်ကိုက်တယ် ဆိုပြီး မီမျက်နှာ ပျက်ချင်နေပြီလေ ။ မောင်. ရဲ. Site ထဲမှာမီ ဘယ်လိုလိုက် ပြီး ပါရမီ ဖြည်.နိုင်မလဲ မီ ၊၊ ဒီဒုက္ခတွေ မခံနိုင်လို. ထွက်ပြေးပြီး အသံကောင်းမ ဟစ်ပါနဲ. မီရယ် ၊ မောင်တို. ကျန်နေခဲ.တဲ. လူတွေရဲ့ ဒုက္ခတွေ ကိုလည်း နားလည်ခံစား ပေးပါအုံး ကွာ ၊၊ မီ.လို တွက်ကြ ကြေးဆိုရင် ၊ ပြောကြ ကြေးဆိုရင် " ပြော မှသိ ၊ ထိမှနာ ၊ သာမှနေ " လို. မောင်.မှာ ပြောခွင်.ရှိမလား မီ ၊၊ ဒါတွေ ထားလိုက် ပါ တော.ကွာ ၊၊
နောက်ဆုံး မှာချင်တာ ကတော. မီလည်း မီပျော်တဲ. နေရာ မှာနေပြီး အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါ ၊၊ မောင်လည်း မောင်ချစ်တဲ. မြေမှာ ၊ အဆင်မပြေမှုတွေ ကြားထဲက အကောင်းဆုံးကြိုး စားသွား မှာပါ ၊၊ ဒါကြောင်. မောင်.ဘေးနား မှာ နားလည်မှူ အ ပြည်.နဲ. ပါရမီ ဖြည်.ပေးနိုင်မယ်. အေမီ ကို ပဲ ဘ၀လက်တွဲ ဖေါ် အဖြစ် ရွေးလိုက်တော.တယ် ၊၊ စီမံကိန်း ပြီးတာနဲ. လက်ထပ် မယ် ၊၊ တောင် ဥက္ကလာဘက် မှာ ခြံနဲ.တိုက်လေး ၀ယ် လိုက် တယ် မီ ၊၊ လက်ထပ်ပြီး ရင်တော.အဲ ဒီ မှာပဲ နေဖြစ်မယ် ၊၊ မီလည်း အဆင်ပြေ နိုင်မယ်. ၊ မီနဲ. စိတ်သဘောချင်းတူတဲ. ၊ ဖြူစင်တဲ.သူ တစ်ယောက် နဲ. ပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေ၊၊ မောင်ကတော. မီစွပ်စွဲ သလို သံသရာ မှာ ပါသွားမယ်. မကောင်းမူ တွေ နဲ. ဆက်လက် ရှင်သန် နေရ အုံးမယ် မီ ..............
မီ ရဲ. တချိန်က
... 10:59:00 AM
24 March 2009 at 6:39 PM
ကိုယ့်လမ်းရဲ့ ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းအတွက် ကိုယ့်မှာပဲ တာဝန်ရှိပါတယ်..အဓိက ကတော့ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှု ကိုယ်စီအတွက် ဘယ်ဘက်ကမှ နောင်တမရကြဖို့ပါ..
25 March 2009 at 7:17 PM